Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn | Site na Linux
Edemede a bu mmelite anyi Ubuntu 14.04 ntuziaka ntinye ntinye.
Ubuntu 14.10 Uicic Unicorn hụrụ ìhè ụbọchị ole na ole gara aga. Dị ka anyị na-eme na ntọhapụ ọ bụla nke ọgba aghara a, lee ụfọdụ ihe ị kwesịrị ime mgbe na-eme a ndozi site na mbido.
3 3. Wụnye kodeks, Flash, mkpụrụ akwụkwọ ọzọ, ọkwọ ụgbọala, wdg.
11 11. Wụnye Compiz & plugins nhazi njikwa
13 13. Wepu ọchụchọ "azụmahịa" na Dash
O yikarịrị ka mgbe mmalite nke Utopic Unicorn, mmelite ọhụrụ apụtawo maka nchịkọta dị iche iche nke ihe oyiyi ISO nke ekesara site na Canonical na-abịa.
nwantakịrị nke sudo nweta ọhụụ
Na Dash m dere Nkwado Asụsụ site n’ebe ahu ị ga-enwe ike itinye asụsụ nke masiri gi.
Akwụkwọ ọkọwa okwu na Spanish maka LibreOffice / OpenOffice
Ọ bụrụ na ịnweghị onye nyocha anwansị na Spanish, ọ ga-ekwe omume itinye ya n'aka dịka ndị a:
1. Gaa Ebe mgbaba LibreOffice
2. Chọọ maka Akwụkwọ ọkọwa okwu Spanish
3. Budata akwụkwọ ọkọwa okwu nke mmasị gị (izugbe ma ọ bụ kpọmkwem na obodo gị)
Site na nke a anyị ga-enwe faịlụ OXT. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-agbanwe ndọtị nke faịlụ ebudatara.
4. Meghee LibreOffice / OpenOffice, họrọ Ngwaọrụ> Mgbatị wee pịa Tinye, anyị na-aga na ndekọ aha ebe faịlụ ebudatara dị ma anyị wụnye ya.
Iji hụ a zuru ezu ndu na-akọwa otú wụnye Spanish mkpoputa na ụtọ asụsụ Checker na LibreOffice / OpenOffice, M na-atụ aro na-agụ nke ochie a ederede. Anyị akwadebekwala a ndu ịwụnye nyocha okwu anwansị Spanish na Firefox / Chromium.
3. Wụnye kodeks, Flash, mkpụrụ akwụkwọ ọzọ, ọkwọ ụgbọala, wdg.
Ubuntu gha achoputa ya ma mee ka gi mata ihe ndi 3D na-acho. N'okwu ahụ, ị ​​ga-ahụ akara ngosi maka kaadị vidiyo na elu panel. Pịa akara ngosi ahụ wee soro ntuziaka ndị ahụ. Ọ dịkwa ike iji wụnye proprietary ọkwọ ụgbọala si Dash> Ọzọ ọkwọ ụgbọala.
sudo apt wụnye ubuntu-mmachi-mgbakwunye
Iji lee vidiyo ụfọdụ ma lelee ọdịnaya weebụ weebụ na ihe nchọgharị weebụ gị, ịkwesịrị ịwụnye flash ngwa mgbakwunye. Enwere ike ịwụnye ya ozugbo na Centerlọ Ọrụ Software ma tinye okwu "flash" ma ọ bụ site na ọnụ na iwu na-esonụ:
wụnye apt-nweta wụnye flashplugin-installer
Iji tinye nkwado maka Zoro ezo DVD (niile "mbụ"), m mepere ọnụ wee dee ihe ndị a:
sudo apt wụnye libdvdread4 sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh
N'oge a na-ede edemede a, nchịkọta Getdeb na Playdeb maka Ubuntu 14.10 abịabeghị.
GetDeb bu webusaiti ebe ejiri richa ego Deb nke n’abaghi ​​n’ebe nchekwa Ubuntu a na-achobu ma o bu udiri ugbua ndi choro n’ebe ahu bu nke emeputara ma nye onye oru njedebe.
sudo tinye-apt-repository ppa: tualatrix / ppa sudo apt melite sudo apt wụnye ubuntu-tweak
sudo tinye-apt-repository ppa: diesch / testing sudo apt melite sudo apt wụnye unsettings
sudo apt wụnye rar unace p7zip-full p7zip-rar sharutils mpack na arj
tinye a synaptic
Ọ dịghị mkpa ebe ọ bụ na anyị nwere ike iji iwu "apt" mgbe niile, mana ebe a ka m hapụrụ ya maka ndị chọrọ ya:
sudo apt wụnye ikike
Ọ dịghị mkpa, ebe ọ bụ na mgbe ị wụnye .deb site na ịpị abụọ, thelọ Ọrụ Software meghere ma ọ nwere ike ịmasị ụfọdụ ndị nostalgic.
ị nwere ike ịwụnye
sudo apt wụnye dconf-ngwaọrụ
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ngwa iji mee ihe ịchọrọ ma ọ bụ na ịchọrọghị ngwa ndị na-abịa na ndabara na Ubuntu, ị nwere ike ịga na Ubuntu Software Center.
Gbanwee ya na Ubuntu gaa na GNOME Flashback
Ọ bụrụ na nhọrọ a adịghị, gbalịa na-ebu ụzọ nye iwu na-esonụ:
sudo apt wụnye gnome-session-flashback
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale GNOME Shell kama ịdị n'otu.
Nwụnye: tinye iwu na ọnụ:
sudo apt-nweta wụnye gnome-shell ubuntu-gnome-desktop
Kpachara anya: itinye GNOME Shell n'ụzọ dị otu a nwere ike ịwụnye nchịkọta GNOME ndị ọzọ ụmụ okorobịa Ubuntu hapụrụ. Iji maa atụ, Nautilus. O doro anya, ma eleghị anya ọ bụ ihe ịchọrọ, yabụ na ikpe ahụ enweghị nsogbu ọ bụla mana ị ga-amarịrị na ọ nwere ike iwetara gị ihe karịrị otu isi ọwụwa. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji GNOME Shell, na-ahapụghị Ubuntu, ndụmọdụ m bụ ịnwale nkesa ewepụtara Ubuntu GNOME.
sudo apt-nweta wụnye cinnamon
Ọ bụrụ na Cinnamon na Ubuntu masịrị gị, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịnwale nkesa sitere Mint Linux.
MATE bụ ndụdụ nke Gnome 2 nke pụtara dị ka ihe ọzọ maka ndị ọrụ GNOME mgbe mgbanwe dị egwu nke gburugburu desktọọpụ a mere mgbe ọ na-eji Shell arụ ụka. N'ụzọ bụ isi, MATE bụ GNOME 2, mana ha gbanwere aha ụfọdụ ngwugwu ha.
sudo apt-nweta wụnye nwunye-desktọọpụ-gburugburu ebe obibi
Zọ kachasị mma iji nwalee MATE bụ site na nbudata nkesa ewepụtara Ubuntu MATE. N'ụzọ dị otú a, ị na-ezere ụdị nsogbu ọ bụla mgbe ị na-etinye ebe desktọọpụ kachasị amasị gị.
11. Wụnye Compiz & plugins nhazi njikwa
sudo apt wụnye compizconfig-settings-manager compiz-plugins-extra
sudo apt wepụ appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
sudo apt wụnye appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
Nchịkọta windo na ogwe aha
Na mbu, menus ngwa nke ejighi maxim putara na menu uwa. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume ugbu a maka menu ndị dị na windo ndị a ka ha pụta na mmanya aha nke ha. Iji mee nke a, ị ga-emepe Dash, pịnye "Ọdịdị", gaa na "Omume" taabụ ma họrọ nhọrọ "Gosi menu menu na windo aha."
13. Wepu ọchụchọ "azụmahịa" na Dash
Iji gbanyụọ ọchụchọ na ntanetị, m mepee dashboard Ntọala System> Nzuzo na Nche> Chọọ. Ozugbo ị ruru ebe ahụ, họrọ nhọrọ "Gụnye nsonaazụ n'ịntanetị."
Iji gbanyụọ naanị ọchụchọ "azụmahịa" nke pụtara na Dash, ị nwere ike ịga Ngwa> Nsonaazụ nyocha> Typedị> Mgbatị. Pịa na ngwa mgbakwunye wee họrọ Kwụsị.
Iji gbanyụọ ọchụchọ niile nke "azụmahịa" (Amazon, Ebay, Storelọ Ahịa Egwu, Popularlọ egwu a ma ama n'ịntanetị, Skimlinks, Ubuntu One Music Search & Ubuntu Shop) n'otu oge ị nwere ike mepee ọnụ ma mee iwu ndị a:
Iji malite, abanyere m na dashboard ahụ Ntọala Ntọala> Akaụntụ Ntanetị. Ozugbo ị ruru ebe ahụ, pịa bọtịnụ "Tinye Akaụntụ".
Ubuntu WebApps na-enye ohere webụsaịtị dịka Gmail, Grooveshark, Last.fm, Facebook, Google Docs na ọtụtụ ndị ọzọ, iji jikọta nke ọma na desktọọpụ Unity: ị ga-enwe ike ịchọ saịtị ahụ site na HUD, ị ga-enweta ọkwa ọkwa desktọọpụ, a ga-agbakwunye ndepụta ngwa ngwa. na ya ga-ọbụna ike na ozi na notma Ọkwa menu.
Iji malite, ị ga-aga otu n'ime saịtị ndị akwadoro (enwere ndepụta zuru ezu Ebe a) wee pịa mmapụta “wụnye”, nke ga - apụta dị ka egosiri na foto dị n’elu.
Gaa Ubuntu 14.10 ndu desktọọpụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn
Ahụrụ m ya n'anya n'ihi na enwere ike ichikota ya "Ugbu a wụnye Linux Mint." Ọ na-abịa na ihe niile ị ga-eme na Ubuntu arụnyere.
Obere ịdị n'otu… 🙂 Haha…
"Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn"
- Wepu Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn… 😛
Che, nke a jupụtara na trolls ... haha!
Ugbu a, mana otu a bụ ihe pụrụ iche, enwere m mmetụta ịhụnanya maka nke a, ọ bụ ya mere m ji hapụ ya ka ọ kwuo ihe niile ọ na-ekwu .. ọ bụkwa Apple Fanboy, ya mere
Apple fanboy ma na-eji mmeri 8.1: /
Zaghachi ka raulvl
nwa ogbenye dijo
Worale nke juputara na ngwanrọ software karịa igwe cyber ebe m jikọtara!
Ehichapu ya kpam kpam ma Wụnye Mageia
(Mkpesa na-ewuli elu NA)
Anọ m na-eso ebe nrụọrụ weebụ gị ruo oge ụfọdụ ma enwere m mmasị na ihe ị biputere mana, ọ bụrụ na ị ga-eme nkuzi na mbipụta nke usoro ọ bụla, ị ga-eme ya nke ndị ọzọ ma ghara ịnwụ ịnyịnya ibu gị maka ụdị Ubuntu ọ bụla na-ewepu ha kwa ọnwa isii, gabigara dị ka isi okwu m (M dokwuo anya, enwere m ElementaryOS Freya na OpenSUSE 6).
(Mkpesa na-ewuli elu)
Dị ka @ 3ndriago kwuru:
Kwụpụ 1: - Iwepụ Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn… 😛
Nzọụkwụ 2: Wụnye 14.04 nke ya na 12.04 bụ otu n'ime nkwụsi ike ha rụzuru ma Unitydị n'otu adịkwaghị arọ: S
Aghọtara m ma ruo n'ókè ụfọdụ ịkekọrịta echiche gị. Agbanyeghị, enwere m ike ịkwado gị na ọtụtụ ndị nwere mmasị n'ụdị ndu a maka ụdị Ubuntu ọ bụla. Ọ bụ ezie na enwere obere esemokwu n’etiti ụdị nke ọ bụla, oge ụfọdụ mgbanwe ndị ahụ anaghị adị obere dịka mmadụ chere.
Ka o sina dị ... ọ bụghị mmadụ niile na-eche echiche dị ka otu na ị ga-asọpụrụ ndị ahụ ... ma nyere ha aka. Ọzọkwa, chee na ọtụtụ mmadụ na-amalite site na ụdị Ubuntu a (maka mma ma ọ bụ njọ).
Ka o sina dị, daalụ maka nkatọ na-ewuli elu gị.
Nke ahụ ziri ezi, na nke m, m na-eji mmeri 8.1 eme ihe, agbanyeghị m na-achọ itinye oge iji wụnye na iji Linux, na nke a ụdị ọ bụla na-esite na Ubuntu, amaara m na ọtụtụ anaghị amasị ya, mana opekata mpe ọ dị mma karịa mgbe wụnye, m nwekwara openSUSE arụnyere na ọ na-egosi na ọ naghị akpaghị aka rụọ ọrụ nkwụnye eriri USB m, nke anaghị eme m na ubuntu, anaghị m achọ igbu oge m na-agbalị ịbanye na ịntanetị ma ọ bụrụ na ụdị Linux a (amakwa m na a ga-enwekwa ndị ọzọ) ka m jiri ya.
Ana m ekele gị maka akwụkwọ ntuziaka ahụ, o nyeere m aka nke ukwuu, ịwụnye ihe m ga-eji na ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ ma ghara iji ha eme ihe ọzọ, mana okwu a bụ HELP na echere m na ị rụzuru ọrụ ahụ.
Aghọtara m azịza Bla6. Mana ọ bụrụ na enweghị akwụkwọ ntuziaka maka mmelite niile, ndị ọrụ ọhụụ ga-enwe nsogbu. Ejikọtara m Linux na Ubuntu 10.xx (Anaghị m echeta). Ọ bụrụ na enweghị akwụkwọ ntuziaka ma eleghị anya ọ ga-adabere na Windows; taa m na-arụ ọrụ ma na mgbe ọ bụla m nwere ike ịhọrọ Ubuntu.
@ Bla6 cheta na nke a bụ blọọgụ obodo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka blọọgụ a kwuo maka nkesa ndị ọzọ, ị nwere ike ịmepụta akaụntụ ma bipụta isiokwu ahụ.
banyere isiokwu; onye soro ibe ochie usemoslinux.blogspot.com ga-ama na site na ụdị ọ bụla nke Ubuntu, @usemoslinux (Pablo) weputara ụdị ọhụrụ nke edemede a nke bụ mpempe akwụkwọ dị mfe na mado nke edemede nke ụdị mbụ na obere ntakịrị mgbanwe imeghari ya ka eweghachite ya mere n'eziokwu, agaghị m akpọ gị ịnyịnya ibu gị.
Banyere mkpa nke isiokwu ahụ, a gwara m gị na n'oge ahụ, afọ ole na ole gara aga, isiokwu a dị m mkpa ma amaara m na ọ bụ maka ọtụtụ ndị ga-anọgide na-abụ maka ọtụtụ ndị bịara ọhụrụ na Ubuntu.
Talk na-ekwu maka ndị gosipụtara ya, echetaghị m ha ọzọ. You maara ka ị nwere ike isi hazie ndị na-egosi gị na ụlọ mmanya? Echere m, deactivate ụfọdụ ma rụọ ọrụ ya ọzọ, ihe ndị dị otú ahụ.
Magburu onwe 😉
Site na mkpebi m, ọ dịkarịa ala ugbu a ekpebiri m ịghara ịrapara na 14.04 ma ghara ịwụnye 14.10 n'ihi na dịka data niile dị iche dị ntakịrị. Abụ m otu n'ime ndị n'ikpeazụ enweghị ike ijide mana hey n'oge a echere m. Na nkenke, mbido a bụ ịgwa gị na agbanyeghị ihe niile m chere na ọ bụ isiokwu zuru oke ma baa uru nke: ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye ubuntu ... .. Ekele gị na nke kachasịnụ na-ekele gị nke ukwuu.
Ọ dị m ka ọ bụ na-efu efu ????
Daalụ maka onye ndu ahụ, ọ bụ eziokwu na oge izizi m gara na ụwa Linux usoro ndị a bụ ezigbo enyemaka nye m, n'ụzọ ezi uche dị na oge nke mmadụ anaghị ahụ isi, mana n'ezie maka ọtụtụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị.
Malite na Ubuntu 14.04, njikwa njikwa ngwungwu ("Ngwungwu ngwugwu dị elu") nwere nhọrọ ọhụrụ. Chọkwaghị mkpa pịnye "apt-get" na ị nwere ike iji "apt", (apt ka ga-arụ ọrụ).
Hahaha, i na amu ihe ohuru! Ekele na ekele
ọ dị mma ịmara. Echere m na ha tinye aha utu aha na .bashrc
Anaghị m atụlee ubuntu a gnu / Linux distro, ọ dị ka windo karịa mgbe ị na-akwalite ụdị dị elu ihe niile na-aga.
nwoke dị mfe idozi, melite kwa afọ abụọ na ọ bụ ya. anọ na 2 nke bụ nkwado ogologo oge na mmelite na Eprel 14.04 ruo 2016. nke a apụtaghị na mmelite ga-agwụ gị ruo afọ 16.04 ebe ọ bụ na a ga-enwe mmelite nche mgbe niile, kernel na ụfọdụ sọftụwia dị ka firefox nke ndị ọrụ chọrọ ịnọgide na-emelite
Akwa Ibom dijo
Ọ dịghị ihe ọ bụla mgbe ahụ, anyị ga-eji nlele anya lee ihe na-eme
Ricardo Montalbo dijo
Achọrọ m ịwụnye ya na mac: D, enwere nkuzi?
Zaghachi Ricardo Montalbo
Mazị N dijo
Enwere usoro iwu ama ama nke arụ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya.
1. Hụ ihe Ubuntu na-enweta site na
2. Iwepụ / reboot buut DVD
3. Wụnye Mint Linux.
Zaghachi Mr N
jehu 88 dijo
Ndewo, m wụnye nsụgharị a site na ịmalite site na USB, enwere oge ọ na-esiri ike ịmalite ma n'ikpeazụ, enwere m ike ịme ihe zuru ezu, n'oge ịmaliteghachi ịmalite ịmalite, m na-ahọrọ ubuntu na ihuenyo ojii na-anọgide na-enweghị na-eme ihe obula. Gịnị nwere ike ịbụ? Adị m otú a otu ụbọchị.
Na distro ndị ọzọ ana m enweta njehie ACPI ma ọ bụ ihe dịka nke ahụ.
Abọchị ole na ole anyị mere ka e nwee ajụjụ ọhụụ na azịza ọhụụ a na-akpọ Jụọ Site na Linux. Anyị na-atụ aro ka ị nyefee ụdị ndụmọdụ a ebe ahụ ka obodo niile nwee ike inyere gị aka na nsogbu gị.
Gbalịa itinye okwu ahụ bụ "ọpụpụ" maka m, mgbe nke ahụ gasịrị, Ubuntu bidoro na-enweghị nsogbu.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ mmejọ ọzọ.
Na Trisquel 7 dị! biko Ubuntu!
Esteban Gimenez dijo
Anọ m na-eji Ubuntu 14.04 maka otu afọ na enweghị m ịhazi PC m oge ọ bụla, enweghị usoro njehie ma ọ bụ PC m belatala mgbe m jiri Windows 8, Imelite na Ubuntu 14.10 ọ ga-abụ nke mbụ oge m ahaziri PC afọ a, ma ọ bụ enwere ike imelite ya na Mmelite njikwa?
Zaghachi Esteban Gimenez
Azịza nye ajụjụ gị dị ebe a: http://ask.desdelinux.net/603/como-actualizar-ubuntu-14-04-a-ubuntu-14-10
Anyị na-akwado ka ị jiri ọrụ a (Jụọ Site na Linux) iji mee ụdị ajụjụ a. 🙂
Enwere m olileanya na ozi a bara uru.
Ọ bụ na n'eziokwu ọdịiche ahụ pere mpe ma ọ bụrụ na ọ baghị uru. Mu onwe m bu "onye ojoo" nke ubuntu mmelite oge a emeghi ya na na laptọọpụ ọzọ m etinyela ya na 14.10 ozugbo ma dịka m etinyebeghi ihe ọhụụ. Echere m na mmelite ahụ ga-abanye n'ime ihe mana anaghị m ahụ ihe ọ bụla ma ọlị. Agbanyeghị, m ga-arapara na 14.04. Ekele.
Ahụrụ m na eserese eserese esiteghị na ya (ya na ndị ọkwọ ụgbọ ala), yabụ nke a bụ obere onyinye m maka ndị nwere kaadị nVidia / Intel.
Ahem… E nwere nVidia mmejuputa iwu a na-akpọ Optimus maka windo nke ọrụ ya bụ iji gbanwee n'etiti nVidia na intel ndịna aka na / ma ọ bụ na-akpaghị aka dị ka ọchịchọ nke ihe aga-eme. Kedu ihe na-enye laptọọpụ ọrụ batrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ, mgbe achọrọ ya na akụrụngwa.
Na Linux enwere mmejuputa abuo nke teknụzụ a. Otu a na-akpọ bumblebee, nke site na oku na optirun iwu, na-enye gị ohere iji kwadebe ngwa na ike nke nVidia ndịna, mgbe na ndabere ọ na-aga n'ihu na-eji Intel eserese. A na-akpọ nke ọzọ praịm, nke na-enye gị ohere ịhọrọ site na nvidia-ntọala n'etiti profaịlụ 2 nke ị nwere ike ịgba ọsọ maka oge nkesa X, otu profaịlụ bụ naanị nVidia, nke ọzọ naanị Intel. Ekwesịrị ịmara na usoro ikpeazụ a akpọ praim (* na-ele anya na oku nke atọ megatron *) kwesiri ịmara na ọ bụ naanị Ubuntu ma baara anyị uru nke ukwuu maka ndị na-eme ụdị aghụghọ niile iji mee batrị ahụ ogologo oge, n'agbanyeghị na arụmọrụ ahụ adịchaghị mma ka ọ dị na windo.
Ọ bụrụ na nke a kpọrọ uche nke ndị nwere mmasị ọ bụla chọrọ ịwụnye "praịm", usoro ị ga - agbaso bụ (Ubuntu 14.04 na 14.10).
1) sudo apt-nweta kpochapụ bumblebee * nvidia- *
2) Malitegharịa ekwentị
3) lspci -vnn | grep -i VGA -A 12 // nweta ihe nlele nke eserese gị ma chọọ onye ọkwọ ụgbọ gị na> http://www.nvidia.com/Download/index.aspx
4) sudo tinye-apt-repository ppa: xorg-edgers / ppa -y && sudo apt-nweta mmelite // gbakwunye repositories
5) Wụnye ọkwọ ụgbọala si "Amachibidoro ọkwọ ụgbọala" ma ọ bụ "Ọzọ ọkwọ ụgbọala"
6) sudo apt-nweta wụnye nvidia-prime
8) Mepee nvidia-ntọala, na profaịlụ ngalaba họrọ eserese ị họọrọ.
PS Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji Bumblebee, ana m akwado ka ị nwaa manjaro distro, o nwere ngwa ọrụ ị ga-etinye maka otu o si dị mfe ọ na-awụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala, belụsọ naanị ndị dị ka nke a site na Ubuntu.
akwụ ụgwọ dijo
daalụ maka enyemaka dị ukwuu maka ndị na-agụghị akwụkwọ na mmemme ma dị mfe
Zaghachi na-agbagha ụgwọ
mere usoro niile na-ekele gị nke ukwuu!
Nicolas Soto dijo
dị nnọọ mma.
Zaghachi Nicolas Soto
Linus 11 dijo
Daalụ maka nkuzi mgbe ị na-eme nwelite ahụ m abatala nke a? Amụma: Ikwu akwụkwọ oyiri UbuntuOne-Go_Daddy_Class_2_CA.pem
m ga-enwe nchegbu?
Tooooooodo nke a enweghị isi ma ọ bụrụ na anyị wụnye windo.
Anọ m ugbu a na Ubuntu 14.10 na-anwa ịchọta etu esi agbanwe Firefox na Spanish ebe site na otu Firefox na Mmasị ọ naghị ewe m. Ma mgbe ahụ, m ga-ahụ otu esi gbanwee kiiboodu na Latin Spanish. Yabụ enweghị m ike ide ennes ma ọ bụ ngwoolu na Alt + 64 anaghị etinye aka na akara aka.
Aga m aga n'ihu na-anwale ... mana nke bụ eziokwu bụ, ọ ga-esiri m ike ikpebi maka Linux ma ọ bụrụ na ihe elementrị ndị a anaghị abịa os wee were oge dị ukwuu.
Ekwesiri m idetu na nke email ahụ site na ibe weebụ ... ị chere?
Agbanyeghị, dị ka enyemaka, ana m akwado ka ị lelee njikọ ndị a:
Esi gbanwee asụsụ Ubuntu (gụnyere Firefox): https://www.youtube.com/watch?v=PJyB-oY3CqE
Otu esi agbanwe onye nyocha anwansi na Firefox: https://blog.desdelinux.net/firefoxchrome-como-habilitar-el-corrector-ortografico-en-espanol/
Esi tinye nke Spanish dictionary na LibreOffice: https://blog.desdelinux.net/firefoxchrome-como-habilitar-el-corrector-ortografico-en-espanol/
Esi gbanwee kiiboodu na Ubuntu: http://ask.desdelinux.net/1102/elegir-distribucion-teclado-espanol-latinoamericano-ubuntu?show=1102#q1102
Esi tinye koodu ASCII na Ubuntu: http://ask.desdelinux.net/1042/como-ingresar-codigo-ascii-en-ubuntu-otras-distribuciones?show=1042#q1042
Okechukwu Iheanacho dijo
Ndewonu mmadu! Enwere ụzọ iji tinye ihe nkedo ịdị n'otu na ala nke ihuenyo na Ubuntu 14.10? Daalụ gị n'ọdịnihu ma gbaghara amaghị m.
oscar ascona dijo
Abụghị m onye maara nke ọma n'okwu a mana ekele m maka ihe m mere ma rịọ gị maka ozi ndị ọzọ gbasara isiokwu a n'ụzọ dị mfe na ebum n'uche.
Zaghachi oscar ascona
HowTo: Wụnye Plasma 5.2 na ArchLinux / Antergos + Atụmatụ